Su'aalaha La Weydiiyo - Shenzhen Herbin Ice Systems Co., Ltd.
Maxay mashiinnadaada barafka ee jilicsan ay uga badbaadin badan yihiin mashiinnada kale ee shiil ee Shiinaha?
Waxaan u isticmaalnay daawaha qalinka si aan ugu sameyno uumi baxa baraf dabacsan. Qalabkan cusub ee shatiga leh wuxuu leeyahay kuleylka kuleylka ugu fiican. Is-weydaarsiga kuleylka ee u dhexeeya biyaha iyo qaboojiyaha ayaa si hufan loo qaban karaa, sidaa darteed, samaynta barafku waxay noqoneysaa mid aad waxtar u leh, waxaana loo baahan yahay awood qaboojiye oo yar
Nidaamyada 'heerkulka uumi baxa ayaa loo oggol yahay inay ka sareeyaan, sida -18C. Biyaha si wanaagsan ayaa loogu qaboojin karaa heerkulka uumi baxa, halka shirkadaha kale ee Shiinaha ay tahay inay qaabeeyaan nidaamyadooda -22C heerkulka uumiga.
Awood-badbaadin = Keydinta biilka korantada.
Mid ka mid ah mashiinka barafka ee 20T / maalin ayaa kaa caawin kara inaad keydiso ilaa USD 600000 20 sano gudahood. Waxaan ku xisaabineynaa korantada qiimaha USD 14 halkii 100KWH.
Awood-badbaadin, waxaad u adeegsaneysaa waxyaabo cusub si aad u sameysid uumi-bixiye. Maaddada cusubi ma leeyihiin waqti dheer oo adeeg ah?
Daawada qalinka ayaa laga sameeyay maado badan, waxayna 2 jeer ka xoog badan tahay birta kaarboonka soo jireenka ah.
Daaweynta kuleylka kadib, uumi bixiyeyaasha leh qalab cusub wax cillad ah kuma yeelan doonaan nolosha muddada dheer. Waxaan shaqaalaysiinay koox xirfadlayaal ah si aan ugu sameyno imtixaan dhameystiran Jaamacadda Zhangjiang Ocean. Waxaanan ku tijaabinay wax ka badan 1000 mashiin suuqa mudo 5 sano ah.
Meeqo mashiinkaaga barafka ah
J: Waxaan ku soo qaadan doonaa iyadoo ku saleysan shuruudaha macaamiisha.
Marka macmiilku waa inuu na siiyaa macluumaadka soo socda markaa si macquul ah ayaan u soo xigan karnaa.
1.Baraf noocee ah ayaa la sameeyaa? Baraf flake ah, baraf tuubbo, baraf xannibaya, mise wax kale?
2. Immisa tan oo baraf ah ayaa sameeya maalin kasta, 24 saacadood gudahood?
3.Waa maxay noqon doontaa isticmaalka ugu weyn ee barafka? Kalluunka keydsho, mise haddii kale?
4.Ii sheeg qorshahaaga ku saabsan ganacsiga barafka, sidaa darteed waxaan kuugu soo bandhigi doonaa xalka ugu fiican ee ku saleysan khibradaada.